Kọwaa folda ehichapụ na Outlook
Taa, anyị ga-ele anya na ọ dị mfe, mana n'otu oge ahụ, ihe bara uru - ihichapụ akwụkwọ ozi ehichapụ. Site n'iji e-mail mee ihe maka akwụkwọ ozi, ọtụtụ na ọtụtụ narị akwụkwọ na-anakọta na nchekwa ndị ọrụ. Ụfọdụ echekwara na Igbe mbata, ndị ọzọ na Sent, Drafts na ndị ọzọ.
Otu esi edebe akaụntụ Mail na Outlook
Imirikiti ndị ọrụ eji ogologo oge mee ihe na mail mail. Ma n'agbanyeghị na ọrụ a nwere interface weebụ dị mfe iji rụọ ọrụ na mail, mana ndị ọrụ ụfọdụ na-ahọrọ ịrụ ọrụ na Outlook. Ma, iji nwee ike ịrụ ọrụ na mail sitere na mail, ị ghaghị ịhazi onye ahịa gị.
Ịmepụta igbe igbe na Outlook
E-mail na-agbadokarị nnyefe ozi nzi ọ bụla site na iji. Kwa ụbọchị, ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eziga ozi site n'Ịntanet na-abawanye. Na nke a, ọ dị mkpa ka ịmepụta mmemme ndị ọrụ pụrụ iche nke ga-akwado ọrụ a, ịnweta ma zipu ozi-e karịa.
Microsoft Outlook 2010: Ntọala Akaụntụ
Mgbe ị debere akaụntụ na Microsoft Outlook, mgbe ụfọdụ, ịchọrọ nhazi ọzọ nke ọnụọgụ nke ọ bụla. Ọzọkwa, enwere ikpe mgbe onye na-ahụ maka ọrụ nzi ozi gbanwere ihe ụfọdụ chọrọ, ya mere, ọ dị mkpa ime mgbanwe na ntọala akaụntụ na mmemme ndị ahịa. Ka anyị chọpụta otu esi edebe akaụntụ na Microsoft Outlook 2010.
Ihe ị ga-eme mgbe nchekwa nchekwa dị na Outlook
Oge ọ bụla ị na-amalite Outlook, a na-ejikọta nchekwa ahụ. Nke a dị mkpa maka ịnweta ma zipụ ozi. Otú ọ dị, e nwere ọnọdụ ebe mmekọrịta nwere ike ọ bụghị nanị na-adịru ogologo oge, kama ọ na-akpatakwa ọtụtụ njehie. Ọ bụrụ na i zutere ụdị nsogbu ahụ, gụọ ntụziaka a, nke ga-enyere gị aka dozie nsogbu a.
Esi hazie Yandex.Mail na MS Outlook
Ọ bụrụ na ị na-arụsi ọrụ ike n'iji onye ahịa Microsoft Outlook email ma amaghị otú e si ahazi ya ka ọ rụọ ọrụ na mail Yandex, wee were minit ole na ole ntụziaka a. N'ebe a, anyị lebakwuo anya iji hazie mail Yandex na anya. Nzọụkwụ ịkwadebe Iji malite nhazi ndị ahịa, ka anyị malite ya.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na Outlook kwụsị izipụ ozi-e
Mgbe, mgbe ị na-arụ ọrụ na onye ahịa Outlook, iji kwụsị izipu ozi ịntanetị, ọ naghị adị mma mgbe niile. Karịsịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ngwa ngwa mee ka akwụkwọ akụkọ ahụ. Ọ bụrụ na ị pụtaworị n'ọnọdụ yiri nke ahụ, ma enweghị ike idozi nsogbu ahụ, wee gụọ obere ntụziaka a. N'ebe a, anyị na-ele anya ọtụtụ ọnọdụ ndị Outlook na-eche ihu ọtụtụ mgbe.
Anyị na-agbakwunye ụbọchị izu ike na akwụkwọ ozi na Outlook
Ọtụtụ mgbe, karịsịa na ozi ụlọ ọrụ, mgbe ị na-ede akwụkwọ ozi, a chọrọ ka ị gosi ntinye aka, nke, dịka iwu, nwere ihe ọmụma banyere ọnọdụ na aha onye na-eziga na ozi kọntaktị ya. Ma ọ bụrụ na ịnwere iziga ọtụtụ akwụkwọ ozi, mgbe ọ bụla ịdekọ otu ozi ahụ dị nnọọ nhịahụ.
Anyị na-ahazi azịza akpaaka na Outlook
Maka mma, onye ahịa ahịa Outlook na-enye ndị ọrụ ya ikike ịzaghachi ozi na-abata. Nke a nwere ike ime ka ọrụ ahụ dị mfe site na mail ahụ, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa izipu otu azịza azịza maka ozi-e abata. Ọzọkwa, a ga-ahazi azịza akpaaka maka niile na-abata ma họrọ.
Cheta ozi ịntanetị na Outlook
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ nke ukwuu na e-mail, ị nwere ike ihuworị ụdị ọnọdụ a, mgbe e zigara onye na-ezighi ezi ozi ma ọ bụ leta n'onwe ya. Ma, n'ezie, n'ọnọdụ ndị dị otú a, m ga-achọ ịghachite leta ahụ, ma ị maghị otu esi echeta akwụkwọ ozi na Outlook.
Ịhazi Gmail na Outlook
Ọ bụrụ na ị jiri ozi email Google ma chọọ ịmepụta Outlook iji rụọ ọrụ na ya, mana nwee nsogbu, wee gụọ ntụziaka a nke ọma. N'ebe a, anyị ga-ele anya n'ụzọ zuru ezu na usoro nke ịmepụta onye ahịa email ka ọ rụọ ọrụ na Gmail. N'adịghị ka ọrụ Yandex na Mail na-ewu ewu, ịmepụta Gmail na Outlook na-ewere ọnọdụ n'ọnọdụ abụọ.
Ghazi Kalinda Google na Outlook
Ọ bụrụ na ị na-eji onye ahịa ahịa Outlook, eleghị anya ị gere ntị na kalenda ahụ ewuru. Na ya, ị nwere ike ịmepụta ncheta dị iche iche, ihe aga-eme, akara ihe na ọtụtụ ndị ọzọ. E nwekwara ọrụ ndị ọzọ na-enye ike ndị yiri ya. Karịsịa, Kalinda Google na-enyekwa ikike ndị yiri ya.
Microsoft Outlook: Tinye igbe igbe
Microsoft Outlook bụ ihe omume email dị mfe ma rụọ ọrụ. Otu n'ime njirimara ya bụ na n'ime ngwa a ị nwere ike ịrụ ọrụ ọtụtụ igbe dị iche iche ọrụ mail n'otu oge. Ma, maka nke a, ha kwesịrị itinye ya na usoro ihe omume ahụ. Ka anyị chọpụta otu esi etinye igbe ozi na Microsoft Outlook.
Naghachite Paswọdu Paswọdu
Ọ bụrụ na ị chefuola ma ọ bụ furu efu okwuntughe sitere na Outlook na akaụntụ, mgbe ahụ na nke a, ị ga-eji mmemme azụmahịa iji weghachite okwuntughe. Otu n'ime mmemme ndị a bụ ngwa asụsụ Russian asụsụ Outlook Password Recovery Lastic. Ya mere, iji weghachite paswọọdụ, anyị kwesịrị ibudata ọrụ ahụ ma wụnye ya na kọmputa gị.
Microsoft Outlook: mepụta folda ọhụrụ
Mgbe ị na-arụ ọrụ na ọnụ ọgụgụ nnukwu igbe eletrọniki, ma ọ bụ ụdị dị iche iche nke ozi, ọ dị mfe idozi akwụkwọ ozi na folda dị iche iche. Njirimara a na-enye usoro mmemme nke Microsoft Outlook. Ka anyị chọpụta otu esi emepụta ndekọ ọhụrụ na ngwa a. Ịmepụta folda Na Microsoft Outlook, ịmepụta nchekwa ọhụrụ dị mfe.
Dezie aha ịbanye na Outlook
N'ihi ọrụ ọrụ nke onye ahịa email site na Microsoft, akwụkwọ ozi nwere ike itinye ntinye aha njikere. Otú ọ dị, ka oge na-aga, enwere ike ịnwe ọnọdụ dị ka mkpa ịgbanwe mbinye aka na Outlook. Na ntuziaka a, anyị ga-ele anya otú ị nwere ike isi dezie ma hazie amaokwu.
Otu esi ehichapụ akaụntụ na Outlook
Onye ahịa email nke Microsoft na-enye usoro ihe omimi ma dị mfe iji rụọ ọrụ na akaụntụ. Na mgbakwunye na ịmepụta akaụntụ ọhụrụ ma debe ndị dị ugbu a, enwere ike ịwepụ ndị na-enweghị isi ugbua. Anyị ga-ekwukwa banyere nhichapụ akụkọ taa. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-agụ ntụziaka a, ọ pụtara na ọ dị gị mkpa iwepu otu ma ọ bụ ọtụtụ akụkọ.
Anyị na-ahazi Outlook maka ọrụ
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro ọ bụla, tupu iji ya eme ihe, ga-ahazi iji nweta mmetụta kachasị na ya. Onye ahịa Microsoft, MS Outlook, abụghị ụdị. Ya mere, taa, anyị ga-eleba anya na ọ bụghị nanị na edepụta ozi Outlook, kama yana usoro mmemme ndị ọzọ.
Ịmepụta nsogbu ahụ na mmalite nke Outlook
Na ndụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọrụ Outlook ọ bụla, enwere oge dị mgbe mmemme ahụ amaliteghị. Ọzọkwa, nke a na-emekarị na-atụghị anya ya na oge na-ezighi ezi. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ọtụtụ na-amalite ịtụ ụjọ, karịsịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ iziga ma ọ bụ nweta akwụkwọ ozi ngwa ngwa. Ya mere, taa, anyị kpebiri ịtụle ọtụtụ ihe mere echiche anaghị amalite ma wepụ ha.
Microsoft Outlook: weghachite ozi ịntanetị ehichapụ
Mgbe ị na-arụ ọrụ na nnukwu mkpụrụ akwụkwọ ozi, onye ọrụ nwere ike imehie na ihichapụ otu akwụkwọ ozi dị mkpa. O nwekwara ike iwepu akwụkwọ ozi ahụ, nke a ga-ewere na mbụ dị ka ihe na-adịghị mkpa, ma ihe ọmụma dị na ya ga-achọ onye ọrụ n'ọdịnihu. N'okwu a, mbipụta nke iweghachi ozi ịntanetị na-adị ngwa ngwa.
https://termotools.com ig.termotools.com © Outlook 2019